Vavaka ho an'i Santa Muerte ho an'ny fitiavana tsy mety vita. ? + Mahomby
Ny vavaka ho an'ny fahafatesana masina ho an'ny tsy manam-pitiavana Afaka miaina an'io fitiavana tadiavinao io ianao na mitondra an'io olona manokana io izay nifindra noho ny antony na antony hafa.
Afaka matoky ianao fa ity Saint ity dia manana fitaovana ilaina handresena ny omena anay.
Afaka manome aina ny fahatsapana maty izy na mahatonga azy ireo hiseho ao amin'ny fo indrindra sy mangidy indrindra misy.
1 Inona no vavaka ho an'i Santa Muerte amin'ny fitiavana tsy hay?
1.1 Ny vavaka ho an'ny fahafatesana masina ho an'ny tsy manam-pitiavana
2 Mahery ve ity vavaka ity?
Inona no vavaka ho an'i Santa Muerte amin'ny fitiavana tsy hay?
ny vavaka Izy ireo dia manompo izay rehetra tianao hasaina.
Raha izany no izy dia mahazo fitiavana mahomby.
Andriamanitra Ray mpamorona dia mampianatra antsika amin'ny alàlan'ny soratra masina masina fa mikasa ny hanampy ny olona rehetra izay manakaiky azy izy ary afaka manatona azy amin'ny alàlan'ny vavaka mivantana na olomasina.
La Santa Muerte Lasa mpinamana isika amin'ny resaka fo sy ny fihetseham-po.
Ny fomba ampiasaina hanomezana antsika ny fangatahana dia mistery fa raha fantatra ho manana fahefana lehibe izy, dia tonga haingana sy mahomby ny fahagagana.
Ny vavaka ho an'ny fahafatesana masina ho an'ny tsy manam-pitiavana
Ry Fahafatesana Masina
ny fitiavana dia nandondona teo am-baravarako, fa ry Santa Muerte,
Izy no nanao fihetsika nahasarika ahy, malahelo aho satria tiako ary tsy izaho no izy.
Ny fijalian'ny tsy fananana fanampiana dia manintona ahy rehefa hitako fa tsy eo an-tanako ny vahaolana amin'ny olako, miangavy anao am-palahelo be aho fa maheno ny vavaka ataoko, manantena aho fa hihaino sy hahatsapa ny fahaizako ianao rehefa miteny ny zanako vavy fotsy, ny olona tsy tiako dia fitiavana tsy azo tanterahina nefa tiako ny hahatanteraka ny fahagagana amin'ny fananako azy, izay mety ho izany no antony nahatonga ahy hankany aminao, fa tsara fanahy sy mahagaga ianao.
Tiako ho tonga mpiara-miasa amiko io olona io ary hamerina amin'ny fitiavany rehetra, hankasitraka anao aho ary miaraka amin'izany dia mpino mahatoky ahy aho.
Miangavy anao aho amin'ny fotoana ilaina hahatanteraka ny fangatahako raha miandry aho, hanaporofo ny tsy fahatokisako amin'ny alàlan'ny fanolorako ny fanatitro mandritra ny fotoana maharitra ho anao, ilay Fahafatesana Malalako.
Ry rahavavy fotsy, matoky anao aho ary mametraka ny finoako rehetra aminao, manantena aho fa hihaino ahy ianao ary hanatanteraka ny faniriako. Ka izay ihany.
izany vavaka ho an'ny fitiavana Mahagaga i Santa Muerte!
Tiavo fa tsy averina Iray amin'ireo fahoriana lehibe nijaly ankehitriny tsy tamin'ny anio ihany fa hatramin'ny nanombohan'ny fotoana.
Matetika isika matoky tena be loatra fa ny zavatra dia tsara ao amin'ny mpiara-miasa amintsika ary gaga isika rehefa very izany.
Amin'io fotoana io no lasa fitaovam-piadiana miafina isika izay afaka manampy antsika handresy ny ady amin'ny fitiavana mahery sy marina ary maharitra.
Mahery ve ity vavaka ity?
Eny, tena mahery tokoa, indrindra raha atao am-pinoana avy amin'ny fo.
Ny tolo-kevitra sasany dia mahomby kokoa ity fehezanteny ity manangana alitara manokana ao an-tranonay izay ananantsika roa labozia mena sy fotsy, raozy fotsy sy mena miaraka amina sary telo an'ny olona tianao.
Azonao atao ihany koa ny manoratra ny anaran'ilay olona eo akaikintsika sy fehezanteny fohy manokana fa ny tena lehibe indrindra dia ny mino foana.
Mino mandrakariva amin'ny herin'ny vavaka amin'ny Fahafatesana Masina amin'ny fitiavana tsy azo atao.
Vavaky mahery mba hiantso ahy